Dowladda Kenya oo xiraysa Xerada Qaxootiga Dhadhaab – Radio Daljir
Dowladda Kenya oo xiraysa Xerada Qaxootiga Dhadhaab
Maarso 27, 2019 7:33 b 0
Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inay gebi ahaanba xireyso Xerada Qaxootiga Dhadhaab, halkaas oo ay ku sugan yihiin Kumanaan u badan Qaxooti Soomaali ah.
Wakaalada wararka AFP ayaa baahisay inay heshay dukuminti ku saabsan xirista xeradan qaxootiga, isla markaana Kenya ay xeri doonto Bisha Agoosto ee Sanadkaan.
Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa horay u shaacisay inay diyaar u tahay inay Kenya ka caawiso dib u celinta dadkaas ku jira Xerada Dhadhaab, iyaga oo aan la qasbin.
Sidoo kale Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa shaacisay in dadkaas dalalkooda dib loogu celin doono halka kuwa kale dib u dejin loogu sameyn doono Gudaha Kenya ama dal Saddexaad.
Xerada Qaxootiga Dhadhaab oo Soddon jir satay ayaa waxaa ku nool 230,000 oo qaxooti ah,kuwaas oo badan kood ah Soomaali ka barakacay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Kenya ayaa Bishii May Sanadkii 2016 waxaa ay sheegtay inay xireyso Xerada Qaxootiga Dhadhaab, iyada oo sheegtay inay hoy u tahay waxa loogu yeero Argagaxisada laguna tababaro Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab wallow ay markii dambe dib u dhigtay.
Barlamaanka Somaaliya oo Kalfadhigii 5-aad yeelanaya
Wasiirka Arrimaha Gudaha DFS oo dhuusomareeb kulamo kula leh Madaxda Galmudug